जहाँ हामी अजेय थियौं: अपराध उपन्यास र असाधारण को बीच | वर्तमान साहित्य
जहाँ हामी अजेय थियौं
जहाँ हामी अजेय थियौं स्पेनिश लेखक मारिया Oruña द्वारा एक अपराध उपन्यास हो। यसको पहिलो संस्करण अप्रिल २०१ in मा प्रकाशित भएको थियो र Cantabrian श्रृंखला को तेस्रो किस्त हो Puerto Escondido किताबहरु। अघिल्लो अध्यायहरु जस्तै, कहानी एउटै सेटिंग्स र नायक - एजेन्ट भ्यालेन्टीना र ओलिभर - यद्यपि यो एक व्यक्तिगत कथानक, एक अद्वितीय मोड़ संग प्रस्तुत गर्दछ।
यसको पूर्ववर्तीहरु को सम्मान मा यस पुस्तक को मुख्य मतभेदहरु मध्ये एक असाधारण विषय को समावेश छ। यसको लागी, Oruña एक व्यापक अनुसन्धान प्रक्रिया, विशेषज्ञहरु र व्यापक दस्तावेज संग साक्षात्कार संग बाहिर गरे। कथा, तब, रहस्यमय भूतमय संसारमा जान्छ, जसको विज्ञान पनि एक सटीक व्याख्या छैन। यो प्रतिमान पारी पाठक को वास्तविक र के हैन बीच बिचार गरी रहन्छ।
1 जहाँ हामी अजेय थियौं त्यसको सारांश
1.1 नयाँ अनुसन्धान
1.2 पहिलो डाटा
1.3 उत्तराधिकारी साक्षात्कार
1.4 असाधारण घटनाहरु
2 हामी कहाँ अजेय छौं को विश्लेषण
2.3.2 भ्यालेन्टीना Redondo
2.4.2 सांगीतिक सेटिंग
2.4.3 नायक को नाम
3 लेखक को बारे मा, मारिया Oruña
सारांश जहाँ हामी अजेय थियौं
valentina उनको प्रेमी ओलिभर लाई बिदाई भन्छ, कार मा आउँछ र सैन्टान्डर जाने को लागी आफ्नो केबिन छोड्न को लागी तैयार गर्दछ। त्यहाँ, लेफ्टिनेन्ट UOPJ को अनुसन्धान क्षेत्र निर्देशित छ। अचानक, कप्तान मार्कोस Caruso बाट एक फोन प्राप्त हुन्छ, जसले उसलाई सूचित गर्दछ कि ऊ सुन्स मा जानै पर्छ, विशेष गरी क्विन्टा डेल अमो को दरबार मा, माली पछि -लियो डियाज- ठाउँको हरियो क्षेत्रमा मृत देखिएको छ.
घर मा छ कोरोनर क्लारा Múgica, जो - पुरानो Leo— को लाश को निरीक्षण पछि उनको हृदयघात बाट मृत्यु भएको अनुमान छ। भ्यालेन्टीना दृश्य मा आइपुग्छ र तुरुन्तै विशेषज्ञ द्वारा मृत्यु को विवरण को बारे मा सूचित गरीन्छ। यो हुनेछ पुष्टि गर्दछ कि उहाँ राती एघार बजेको वरिपरि बित्नुभयो, र त्यो, यसको अतिरिक्त, कसैले आफ्नो आँखा बन्द गरेको छ। यो अन्तिम विवरण एजेन्ट को चासो छ।
लेफ्टिनेन्टले मृतकको वरिपरि सबै कुरा अवलोकन गर्न थाल्छ, जसले उसलाई प्रशंसा गर्न को लागी प्रशस्त र सुन्दर हवेली छ। दूरी मा उहाँले एक जवान मानिस visualizes, यो बारे मा छ कार्लोस ग्रीन, जसलाई तपाइँ सोधपुछ गर्नु पर्छ, देखि उनी एक थिए जसले शव पाए। मानिस एक लेखक र सम्पत्ती को मालिक हो, उहाँ त्यहाँ गर्मी बिताउन, आफ्नो नयाँ किताब को पांडुलिपि समाप्त गर्न र घर बेच्न को लागी त्यहाँ हुनुहुन्छ।
हरियो प्रकट हुन्छ भ्यालेन्टीना र उनको साथीहरु iveRiveiro र Sabadelle— कि पाँचौं मा केहि अनौठो हुन्छ। उनको आगमन पछि, उनले अनौठो आवाज, अकथनीय उपस्थिति देखेका छन् र कुनै कारण बिना उनको शरीर मा चोटहरु संग उठेको छ। शंकास्पद हुनुको बावजूद, लेफ्टिनेन्टले यी असाधारण घटनाहरु को बारे मा सोधपुछ गर्नु पर्छ र कसरी उनीहरु मालीको मृत्यु संग सम्बन्धित छन्।
यो कसरी एक कहानी उजागर हुन्छ कि ग्रीन को अतीत को यात्रा intertwines - जो आफ्नो युवावस्था र Suances मा ग्रीष्मकाल को याद छ, रहस्यहरु संग क्विन्टा डेल आमो मा एम्बेडेड संग। सबै जबकि Díaz र भूत घटनाहरु को मृत्यु मा अनुसन्धान बाहिर गरीरहेछ। उत्तरार्द्ध प्रोफेसर Machín, जो असाधारण संस्थाहरु र घटनाहरु मा एक पाठ्यक्रम दिन्छन् संग परामर्श गरिनेछ।
विश्लेषण जहाँ हामी अजेय थियौं
जहाँ हामी अजेय थियौं यो Suances, स्पेन को तटीय क्षेत्र मा सेट गरीएको छ। किताब छ ४१४ पृष्ठहरु १५ अध्यायहरु बीच वितरित, जसमा तीन भूखंडहरु दुई कथा रूपहरु को तहत गिनती विकसित गरीन्छ। त्यहाँ छ एक सर्वव्यापी तेस्रो व्यक्ति बयान कि पात्रहरु को अनुभव को वर्णन गर्दछ, र पहिलो व्यक्ति मा अर्को त्यो कार्लोस ग्रीन द्वारा उपन्यास को मस्यौदा बताउँछ।
प्रारम्भिक वितरण जस्तै, Oruña Cantabria मा यो कथा recreatesविशेष गरी मास्टर को भव्य दरबार मा। लेखक एक असाधारण तरीका मा ठाउँ को विवरण, साथै Suances मा अन्य स्थानहरु। स्पेनिश को विस्तृत अनुसन्धान कार्य, जो सफा विवरण संग यी राजसी सेटिंग्स मा पाठक स्थानान्तरण गर्न को लागी प्रबन्ध गर्दछ।
उनी एक युवा अमेरिकी लेखक हुन्। उहाँ क्यालिफोर्नियामा बस्नुहुन्छ र आफ्नो नयाँ उपन्यास लेख्न Suances को यात्रा। उनकी हजुरआमा मार्था - जो अघिल्लो बर्ष मरेकी थिईन् - उनलाई "क्विन्टा डेल अमो" नामक दरबारको एकमात्र उत्तराधिकारीको रूपमा छोडिदिए। कार्लोस महान नोस्टाल्जिया संग ठाउँ सम्झन्छन्, किनकि उनले आफ्नो धेरै बिदाहरु त्यहाँ बिताए र सर्फिंग संग उनको पहिलो अनुभव थियो।
यो श्रृंखला को नायक हो, स्पेनी सिभिल गार्ड बाट एक लेफ्टिनेन्ट जो न्यायिक पुलिस को जैविक इकाई को प्रमुख (UOPJ)। छ महिना पहिले उनी आफ्नो प्रेमी ओलिभर संग संगै Suances मा भिल्ला मरीना बसाई। तब देखि उनको जीवन अधिक शान्त र स्थिर भएको छ।
उहाँ संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को एक अनुभवी प्रोफेसर हो, ऊ असाधारण संस्थाहरु मा व्याख्यान दिन को लागी शहर मा छ। यी वार्ताहरु Palacio de La Magdalena को एम्फीथिएटर मा आयोजित गरीन्छ, जसमा उनी विशेष गरी एक विशेषज्ञ बिद्यार्थी संग बिषय मा साझा गर्दछन्।
को सफलता को कारण Serie Puerto Escondido किताबहरु - जब देखि यो मात्र स्टेज को रूप मा Suances राखिएको छ, सिटी काउन्सिल २०१ Pu मा प्यूर्टो Escondido साहित्यिक मार्ग बनाईयो। त्यहाँ, आगन्तुकहरु उपन्यास मा प्रस्तुत गरीएको छ कि सबै ठाउँहरु को माध्यम बाट हिंड्न सक्छन्।
स्पेनी लेखक कथा को विकास भर मा धुन को समावेश संग उनको कथाहरु को विशेषता। यस किस्त को लागी उनले6संगीत विषयवस्तु, एक सूची हो कि मंच मा रमाईलो गर्न सकिन्छ Spotify, नाम संग: संगीत - जहाँ हामी अजेय थियौं - Spotify.
नायक को नाम
Oruña पोर्टल को लागी Montse गार्सिया संग एक साक्षात्कार मा घोषणा गरे ला भोज डे गलिसिया, que श्रृंखला को नायक को नाम, Valentina Redondo, लेखक डोलोरेस Redondo को लागी एक इशारा हो। यस सन्दर्भमा, उनले व्यक्त गरे: "यो व्यक्तिगत थियो, किनकि मेरो लागी, एक लेखक को रूप मा, यो प्रतीक हो कि" सपना देख्न कहिल्यै नछोड्नुहोस् ", किनकि उनले मलाई काम जारी राख्न को लागी प्रोत्साहित गरे जब मैले प्रकाशन को बारे मा सोचेन।
ग्यालिसियन लेखक मारिया Oruña Reinoso उहाँ १ 1976 V मा भिगो (स्पेन) मा जन्मनुभएको थियो। उनले विश्वविद्यालय मा कानून को अध्ययन गरे, एक पेशा हो कि उनले श्रम र व्यावसायिक क्षेत्र मा दस बर्ष सम्म अभ्यास गरे। त्यस अवधिको पछि उनले आफूलाई पूरै साहित्यमा समर्पित गरे। २०१ 2013 मा, उनले प्रकाशित गरे तीरंदाजको हात, उनको पहिलो काम, एक श्रम विषय संग एक उपन्यास, एक वकील को रूप मा उनको पेशेवर अनुभव को आधार मा।
दुई बर्ष पछि उनले आफ्नो दोस्रो साहित्यिक काम प्रस्तुत गरे, अपराध उपन्यास विधा मा एक डेब्यू: लुकेको पोर्ट (2015)। उनी संगै उनले आफ्नो प्रशंसित श्रृंखला शुरू गरे Puerto Escondido किताबहरु, जसको मुख्य स्टेज को रूप मा Cantabria छ। यो ठाउँ लेखक को लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छ, जब देखि उनी एक बच्चा थियो तब बाट यो बिल्कुल थाहा छ; व्यर्थमा छैन उसले यो आफ्नो कथाहरु मा विस्तार मा वर्णन गर्दछ।
यो पहिलो किस्त को सफलता को लागी धन्यवाद, केहि बर्ष पछि उनले पोस्ट गरे: जाने ठाउँ (2017), साथै पाठकहरु द्वारा एक महान स्वीकृति संग। अहिले सम्म श्रृंखला दुई अतिरिक्त उपन्यासहरु छन्: जहाँ हामी अजेय थियौं (2018) र ज्वारले के लुकाउँछ (२०२१)। यी दुई कथाहरु को बीच मा, स्पेनिश प्रस्तुत: चार हावाको जंगल (2020)।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » जहाँ हामी अजेय थियौं
मारियो Villén Lucena। Nazarí को लेखक संग साक्षात्कार